Nur Faradyna Putri Kumarudin
Physiotherapist; BSc. Physiotherapy (Trinity College, Dublin), Dip. Physiotherapy (NYP, S’pore), M.S.P.A (S’pore)
အာရုံကြောဗေဒ နှင့် နှလုံးအဆုတ်ဗေဒဆိုင်ရာ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးပြုစုကုသမှု။
Faradyna သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Nanyang Polytechnic မှဘွဲ့ရခဲ့သည်။ စင်ကာပူဘောလုံးအဖွဲ့အစည်းတွင် အလွတ်တန်းပြန်လည်သန်စွမ်းရေးပြုစုကုသသူအနေဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းမှ ကနဦးအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ သည်။ အာကစားကြောင့်ဖြစ်သောအရိုးကြွက်သားဒဏ်ရာများ အထူးသဖြင့် ခြေထောက်ဒဏ်ရာများ ကုသမှုတွင် အဓိကပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Trinity College မှဘွဲ့ရခဲ့သည်။ လက်တွေ့အထူးပြုကဏ္ဍများမှာ နှလုံး အဆုတ်ဗေဒ၊ အရိုးနှင့်ကျောရိုး အစရှိသည့် အရိုးကြွက်သားဆိုင်ရာ၊ လေဖြတ်ခြင်း စသည့် အာရုံကြောဗေဒ နှင့် ရောဂါသက်သာစေရန်ပြုစုကုသမှုတို့ဖြစ်ပါသည်။